Ukukhanya kwe-LED Linear ebuyiselwe emuva
I-Linear Light Linear ekhanyiswe phansi
Ukukhanya kwe-LED Linear ngaphambili
Isazi sokwenza i-Linear Lighting — iwebhusayithi esemthethweni kaLuxury yethulwe ngokusemthethweni.
Kusukela ngomhlaka-9 Agasti, ungafinyelela ukubambisana kwezebhizinisi nokukhanya kwe-Luxury ngokuvakashela ku-www.luxury-light.com. Okunethezeka kwasungulwa ngo-2011, kugxilwe kwifenisha ehlakaniphile yezixazululo zokukhanyisa zasendaweni, izibani zomugqa ezenzelwe ngokuzimela ezifanele izimo ezahlukahlukene zokufaka isicelo, futhi zizo ...
Izinzuzo eziyishumi zamalambu e-LED6-10
Inzuzo yesithupha, ububanzi besicelo esibanzi Ngenxa yokuxinana kwayo, iyunithi ngalinye le-chip liyi-3 ~ 5mm isikwele noma liyindilinga, ngakho-ke lifaneleka ngokwengeziwe ukulungiselela amadivayisi ngenqubo eyinkimbinkimbi yokumodela. Isibonelo, ukwenziwa kwamashubhu athambile, agobekayo, imichilo elula, namalambu akhethekile, okwamanje kuphela ...
Izinzuzo eziyishumi zezibani ze-LED1-5
Inzuzo eyodwa. Umzimba okhanyayo mncane kakhulu ukukhanya kwe-LED kuyinto encane, enhle kakhulu i-chip ye-LED efakwe ku-epoxy resin esobala, ngakho-ke incane kakhulu, ilula kakhulu, ingagcina izinto eziningi nendawo ekukhiqizeni nasekusebenziseni. Inzuzo ezimbili, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kakhulu I-vo esebenzayo ...
Umlingani womhlaba wonke
Faka ikheli lakho le-imeyili ukuze uthole izindaba nemicimbi yakamuva ye-Metal.